Hruboskalsko z výšky - Ukukhishwa kwezimakethe zomculo wamahhala
IkhayaCzech ParadiseHruboskalsko kusuka phezulu
Hruboskalsko kusuka phezulu	Shiya amazwana
I-Hruboskalské edolobheni edwaleni nayo iyindawo ebalulekile yezivakashi. Phakathi kwezikhumbuzo ezidume kakhulu yi-Hrubá skála castle, eyakhelwe phezu kwe-rock massif kakade ku-14. ikhulu le-Wallenstein Castle. Ngesikhathi Bedrock yakhiwe ezindaweni eziningi indawo ezifana uMarian ithemba, nethemba bomkhiqizo, ngesikhathi ingonyama ithemba nomunye lapho izivakashi zingabuka umxhwele okwakheke rock abaqwali zdolávající ngokuvamile kakhulu kwemibhoshongo ezizungezile. Ngenxa yemithombo yeHruboskalska ecebile nge-calcium ions, i-sedmihorky spa yasungulwa lapha.
I-Krkonoše isithombeni se-2018 →